Ny fianakaviam-piteny dia vondrom-piteny iray fiaviana izay nivoatra tamin ny alalan ny fampitan ny taranaka mifandimbin ny mpiteny azy avy amin ny razam-piteny iraisana. Ny hoe fianakaviam-piteny dia andian-teny ampitahana ny fivoaran ny fiteny amin ny fivoaranny zava-manana aina, araka ny modelin ny fitaranahana. Ny fananganana izany fihavananan ny fiteny izany no ivon ny fikarohan ny haiteny ara-tantara. Ny ankamaroan ny fiteny eto amin izao tontolo izao dia azo avondrona anaty fianakaviam-piteny. Araka ny fampitahana azy ireo amin ny hazo dia atao hoe sampam-piteny ny vokatry ny fizarà ...
Ny Alemaina na Repoblika federalini Alemaina aminny fampiasana ofisialy, dia firenena ny Eoropa andrefana. Manana amorontsiraka aminny Ranomasina Avaratra ny Alemaina, mizara sisin-tany amini Danmarka, Polonia, Repoblika Tseky, Nederlandy, ny Belzika, Loksemborga, Frantsa, Soisa, ary Aotrisy. Ny alemaina dia repoblika federaly, misy faritra 16 any Bundesländer na oficial Länder aminny fiteny Alemana. Taminny andro taloha, ny Alemaina tahaka ny fantantsika aminizao fotoana izao dia printsipaotia miisa mahery ny telonjato mizaka tena avokoa. Tao aminny Empira Jermanika Masina ny Alemaina tam ...
I Azia na Asia dia kontinenta izay ahitana firenena miisa 46, izay voafaritry ny Ranomasimbe Arktika ao avaratra, ny andilan-dranomasini Bering sy ny Ranomasimbe Pasifika ao atsinanana, ny Ranomasimbe Indiana ao atsimo, ary ny Ranomasina Mena sy ny Ranomasina Mediteranea ao atsimo-atsinanana. Ny sisiny manasaraka ani Azia sy Eorôpa dia nifanarahana fa ny tendrombohitra Oraly. Raha heverina ho kontinenta iray i Azia sy i Eorôpa noho izy ireo tany mitohy dia antsoina hoe Eorazia. Manana velarana 43 810 582 km 2 i Azia ka izy no be velarana indrindra aminny kontinenta rehetra. Izy koa no be m ...
I Eorôpa dia kontinenta hita manontolo ao aminny ila-bolantany avaratra sady manana ny ampahany be aminny taniny ao aminny ila-bolantany atsinanana, izay voafaritry ny kontinentani Azia avy ao atsinanana, ny Ranomasina Mediteranea avy ao atsimo, ny Ranomasimbe Atlantika sy ny Ranomasini Norvezy avy ao andrefana, ary ny Ranomasimbe Arktika avy ao avaratra i Eorôpa. Matetika dia zaraina ho faritra efatra i Eorôpa ka ahitana ani Eorôpa Avaratra, i Eorôpa Andrefana, i Eorôpa Afovoany, i Eorôpa Atsinanana ary i Eorôpa Atsimo. I Eoropa dia tenenina matetika fa anisanny kontinenta enina misy eto ...
Ny faritany dia fitambaranny tanàna na toerana maromaro ao anatinny firenena iray, voatsinjara araka ny toetra ifandraisanizy ireo, toy ny toetrandro, ny vokatry ny fambolena, ny fomban-drazana ary ny fiteny.
Ny Etazonia dia firenena any Amerika Avaratra izay mizara ho faritra mizakatena dimampolo, distrika federaly iray ary, faritra ivelany 14. Ny firenena Kanada no manamorona azy ao avaratra, Meksika kosa avy atsy atsimo. Ny ranomasina Atlantika sy Pasifika no sisin-taniny atsinanana sy andrefana. Ny faritra iray izay atao hoe Alaska dia any avaratri Kanada no misy azy ary ny andiannosy Hawaii dia any aminny ranomasina Pasifika. 9.7 tapitrisa kilaometatra toradroa ny fivelarantany misy azy, ary faha-efatra eran-tany izy aminny fivelaran-tany sy ny isanny mponina monina ao aminy. Izy no firene ...
I India dia firenena ao Azia Atsimo, i New Delhi no renivohiny ary i Bombay no tana-dehibe be mponina indrindra ao. Ny anaram-pirenena hoe India dia avy amin ny fiteny persana hoe Sindhu, anarana persana amin ny fiteny sanskrity, ny renirano Indus. Ny anarana ofisialy dia mampiasa ny teny Bharat mpanjaka hindoa niaina taona taloha. Ny anarany fahatelo: Hindustan tanin ny Hindoa amin ny fiteny persana, dia niasa tamin ny taonanny Empira Môgôly, ilay teny Hindusta n dia tsy ofisialy intsony ankehitriny fa ampiasaina matetika rehefa manonona an i India. I India ny firenena be olona indrindra ...
Any avaratra, eo anelanelani Madagasikarasy ny kontinenta afrikana no misy ny tamba-nosy Kômôro. Ao ihany koa ireo nosy kely - ankoatra ny nosy Tromelin izay mitokana any aminny Ranomasimbe Indiana - izay eo ambany fiadidiani Frantsa ka antsoina hoe "Nosy miparitaka": ny nosy Glorieuses, Juan de Nova, Europa ary Bassas da India.
Ny lakandranoni Suez dia lakandrano any Ejipta, eo anelanelanny Ranomasina Mena sy ny Ranomasina Mediteranea. 190.25 km ny halavany, 280-345 m ny ampohiny, ary 22.50 m ny halaliny. Miampita ny ismani Suez izy, avy any Port-Saïd eo aminny Ranomasina Mediteranea, hatrany aminny tanànanny Suez eo aminny Ranomasina Mena. Ahafahanireo ranomasina roa ireo mifandray izany. Nanomboka taminny 1859 ilay tetikasa fangadiana azy, ary tapitra taminny 1869 izany. Ny diplômata sy injeniera frantsay Ferdinand de Lesseps no nitondra ilay tetikasa. Io lakandrano io dia ahafahanny sambo avy ao Eoropa makany ...
Ilay Nosini Kiprosy dia nosy ao anatinny Mediteranea atsinanana, izy dia eo akaikinny Siria sy eo antsimo ny Anatolia. Mpikambana aminny Vondrona Eoropeanina ilay silaka antsimonilay nosy. Misy mponina 1.300.000 no miaina ao. Ny Grika no tena betsaka indrindra ao anatini Kiprosy iray mantolo, misy koa moa olona Britanika mipetraka ao anatinny base militaire, ary ireo bazy miaramila ireo dia ambanny fitondranny Nosy Britanika. Ilay silaka avaratra dia efa nahazo fahaleovantena taminny taona 1974. Taminio no nisy Kiprosy anaky roa, ary voasaraka izy ireo aminilay "tsipika Attila". Misy ny Re ...
I Norvezy dia firenena any Eorôpa Avaratra, ao amin ny lafiny andrefan ny saikanosy skandinava, miray sisintany amin i Finlandy sy Soeda. Firenena tsy dia be mponina izy saingy isan ny tany manan-karena, noho izy mamokatra solitany. I Oslo no renivohiny ary ny fiteny nôrveziana no fiteny ofisialy ampiasaina any aminy. I Nôrvezy dia fanjakana enti-mpanjaka, Harald V no manjaka ao, ary mbola eo ambany fiandrianany ireo nosy kely toa ny nosy Jan Mayen, ny nosy Pierre Ier, ny nosy Bouvet, ary ny fitambaran ireo nosy kelin i Svalbard.
Ny Ranomasimbe Indiana dia nantsoina hoe Ranomasimbe Atsinanana na Ranomasini India taloha. Manana velarana 75.000.000 km² izy ary voafaritri India, Pakistan sy Iran any avaratra ; Birmania, Tailandia, Malezia, Indonesia ary Aostralia any atsinanana ; ny Ranomasimbe Antarktika any atsimo ary Afrika sy ny Saikanosy Arabo any andrefana.
Ny ranomasina dia velaran-drano midadasika, manodidina kôntinenta amin ny ankapobeny, ary mahasarona faritra lehibe dia lehibe amin ny velaran ny tany manontolo.
Ny renirano dia lakandrano voajanahary nohadian ny ranomamy. Ny toerana ipoiran ny renirano dia atao hoe loharano ary ny toerana anariany ny ranony dia atao hoe vavarano. Ny vavarano dia mety ranomasina na farihy.
I Kiprosy Avaratra na Repoblika Torkani Kiprosy Avaratra dia fanjakana izay tsy misy manaiky afa-tsy i Torkia, ao aminny tapany avaratra atsinananny nosy Kiprosy. Nanambara ny fahaleovantenany izy taminny 15 Novambra 1983, sivy taona taorianny fidirana antsehatry ny tafika torka tao aminny tapany avaratry ny nosy taminny taona 1974, hanoherana ny fikasana hanakambana io nosy io amini Gresy nataonny vondrona manamboninahitra mpanongam-panjakana tao aminny mpisahana ny fiambenana ny firenena kiprioty, izay avy nanongana ny filoha Mikhaíl Makarios taminny taona 1974. Atao hoe Kuzey Kıbrıs Tür ...
Ny Repoblikani Kiprôsy na Repoblikani Kipra dia firenena mpikambana aminny Vondrona Eoropeanina arỳ antsinanananny Ranomasina Mediteranea. Taminny taona 1974, ny tapany avaratranilay nosy eo ivelanny tsipika maintso, lasani Torkia sy atony hoe anazy. Lasa Repoblika hafa io ambanny anarana Repoblika Torkani Kipra Avaratra. Niditra tao anatin ny faritra Euro i Kipra taminny 1 Janoary 2008
Ny tanimaty dia midika toerana na velarana tsy mamoka-javatra, noho ny taniny tsy afaka ambolena voninkazo, na noho ny hakely ny ranonorana. Ny tanimaty dia fantatra aminny endriny tsy misy zavamaniry firy aminny velarana lehibe. Ny tanimaty dia any ivelanny toerana ipetrahana sy ambolenny olombelona.
Ny tendrontany atsimo dia ny teboka farany atsimo indrindra eto amin ny Tany. Ao amin ny kôntinenta Antarktika no misy azy. Io no teboka ihaonan ny laharan-jara hasina rehetra any atsimo indrindra.
Ny Trôpikanny Adijady na Trôpika Atsimo na Adijady na zana-pehintany Adijady dia anisanny fehintany dimy aseho aminny saritany. Ny laharam-pehitaniny dia 23° 26′ 22″ S aminny ila-bolantany atsimo izay manakaiky indrindra ny fehiben-tany izany, Eo aminio zana-pehintany Adijady io no ahitana aminny faritra atsimo indrindra aminny ila-bolantany atsimo ny masoandro eo an-tampon-doha, aminny fotoana mahalava indrindra ny andro mitaha aminny alina, isaky ny 21 Desambra. Ny faribolana efatra hafa dia ny zana-pehintany Asorotany hita any aminny ila-bolantany avaratra, ny fehiben-tany, ny fehin-ten ...
Vondrona iraisanny governemanta maro ny Vondrona Eorôpeanina. Misy firenena 27 ao anatiny. Voaforona taminny 7 febroary 1992 izy, taminny nahasoniavanny firenena eorôpeanina 12 ny dinani Maastricht, efa mpikambana tao aminny CEE na EEC. 30.82%nny PIB eto an-tany dia any Eorôpa no misy azy, io no tsena ara-toekarena ngeza indrindra eto an-tany. Firaisam-padintseranana ny Vondrona Eorôpeanina, ary misy firenena 15 nahamafy ny fiaraha-miasa ao anatinny fikambanana ara-bola sy ara-toekarena, ilay faritra Euro. Misy firenena mampiasa miaraka ilay vola tokana ny Euro €
I Ôseania dia kôntinenta izay fitambaran i Aostralia sy ny nosy anarivony maro manodidina ao amin ny faritra atsimon ny ranomasimbe Pasifika. Ahitana firenena miisa 14 ny ao Ôseania. Hita ao i Aostralia, i Zelanda Vaovao, i Papoazia, i Ginea Vaovao, Tasmania, i Melanezia, i Mikrônezia, i Pôlinezia, i Haoay. Ny nosy sy ny tamba-nosy sasany dia mifanalavitra dia mifanalavitra. Manana velarana 8 523 655 km2 eo ny kôntinentan i Ôseania. Ny 90 %n izay dia i Aostralia. Izy no kôntinenta kely indrindra eto an-tany. Melanezia . Mikrônesia Indônezia Tasmania Pôlinezia Aostralia Zelanda Vaovao